Raila Odinga oo Qaadacay Natiijada Hordhaca ah ee Doorashada Kenya (Akhri Sababta) – Radio Daljir
Raila Odinga oo Qaadacay Natiijada Hordhaca ah ee Doorashada Kenya (Akhri Sababta)
Agoosto 9, 2017 6:29 b 0
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya, Raila Odinga ayaa qaadacay natiijada doorashada, iyadoo weli ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay.
Raila waxaa uu sheegay in aysan ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashada.
Dhanka kale weli waxaa socota tirinta codadka doorashada Kenya, codadka horudhaca ee ilaa iyo imika la tiriyayna waxay muujinayaan in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horreeyo boqolkiiba konton iyo shan codadkii la tiriyay.
Waxaa uu sheegay in qaabka soo bandhigida codadka la tiriyay ay aad uqaldan yihiin ayna qasab tahay in gudiga doorashadu ay xal ukeenaan.
Raila Odinga ayaa si gaar ah utilmaamay labo Foom oo ay aheyd iney isticmaalaan gudiga doorashada laakiin shaki badan ay ka qabaan in la sameyn waayo.
Shirkiisa jaraa’id ayuu ku sheegay iney aheyd in la isticmaalo foomamka kala ah 34A iyo 34B sida uu hadalka udhigay.
Gudiga doorashada ayaa natiijada la hayo kusoo bandhigaya WEBSITE-kooda oo ay sidoo kale warbaahinta ka isticmaalayaan, Mr Odinga ayaana sheegay in dhamaan foomamka 34A iyo 34B ay qasab tahay in laga helo jadwalka. Laakiin gudiga doorashada IEBC ayaa tilmaantay in wakiiladda musharaxiinta madaxweynayaasha ay si qaas ah uhelayaan foomka 34A.
Hadaba Waa Maxay Foomamka?
Marka la fiirinayo qaabka doorashada, Foomka 34A waa Foomka ugu horreeya ee loo isticmaalo in lagu soo koobo natiijooyinka doorashada madaxweynaha. Waxaa buuxinaya Sarkaalka Guddoonka ka dib marka la tiriyo codadka goobta ama halkii codka laga dhiibtay. Waxaana foomkaas ku jira faahfaahin ku saabsan codadka ay kala heleen musharaxiinta kadibna wuxuu faahfaahin ka bixiyay tirada guud ee cod-bixiyeyaasha ka diiwaan-gashan ee saldhigaas, codadka la diiday, kuwa la diidan yahay, kuwa la isku haysto iyo kuwo sax ah. Musharaxa ama wakiilladooda ayaa markaa looga baahan yahay inay saxiixaan oo ay ansixiyaan in waxyaabaha ku jira foomka ay sax yihiin.
Qeybta 39 ee Xeerka Doorashada Kenya wuxuu sheegayaa in doorashada madaxweynaha, IEBC “uu si elektaroonik ah u gudbiyo, qaabka loo soo gudbiyey natiijooyinka, natiijada doorashada Madaxweynaha oo ka imanaya goob cod-bixineed oo udubdhexaad ah iyo xarun tilmaanta qaranka. ”
Sidoo kale, Foomka 34A waxaa loo wareejiyaa Sarkaalka Soo noqoshada Degaanka, ka dibna wuxuu buuxinayaa foomka 34B. Waxaa loo isticmaalaa isku-darka natiijooyinka doorashooyinka madaxweynaha. Halkaas waxaa lagu soo bandhigayaa: lambarka codbixinta, magaca saldhigga laga codeeyay, tirada codbixiyeyaasha ka diiwaan gashanaa goobta, kadibna waxaa musharrax kasta loo gudbinayaa tirada codadka saxda ah markaas ayaana loo tuurayaa xarunta dhexe ee tirinta codadka.
Shirkii jaraa’id ee gudiga doorashada IEBC ayaa saqdii dhexe ka hadlay arrintan, guddoomiye kuxigeenka gudigaas Maina ayaa sheegtay in qaabka uu noqon doono go’aanka ugu dambeeya ee tartanka madaxweynaha.
“Sharcigu wuxuu u baahan yahay inaan helno foomka 34B mid kasta oo ka mid ah Saraakiisha Soo Celinta ka hor inta aynaan awoodin inaan sheegno natiijada. Caddaynta natiijooyinka waxay ku salaysnaan doontaa foomka 34B ee aan ka heleyno Saraakiisha Soo noqoshada, “ayay tiri Ms Maina.
Waxay sheegtay in Saraakiisha Hogaamintu ay gudbinayaan natiijooyinkii la raadiyay ee ka yimid foomka 34A ee saldhigyada cod bixinta.
Gudoomiyihii Hore ee Gudiga Doorashooyinka Puntland Weriye Axmed Kismaayo oo Geeriyoodey